Marijuana chirimwa chinotungamira | MyWeedSeeds.com
mirayiridzo yekudyara mbanje
Marijuana chirimwa guides
Maitiro ekugadzira mbanje zvirimwa
Kana tichiti kuumbana, tinoreva kuberekana kweasexual. Isu tinotora akacheka kubva kumukadzi mbanje chirimwa chiri kumera uye isu tinoadzimura iwo hydroponically kurima nyowani mbesa chirimwa. Iwe unozopedzisira uine zvakafanana magene machisi kune wako mubereki chirimwa. Iwe unozopihwa zvakafanana hunhu hwemuti iwe ...
Kukohwa kwakanaka kwako mbanje mbesa
Kudzidza nzira yekukohwa mbanje zvirinani zvakakosha pakurima chirimwa chako. Izvo zvinogona kuve zvakaenzana zvakakosha sekukura kwacho pachako. Murimi wega wega ndiye anoona kunhuwirira kwechirimwa uye kunhuwirira, pamwe nekuomesa nekuporesa iyo zvirimwa kodzero yekuvandudza mune yega yega chikamu ...
Maitiro ekuomesa mbanje buds
Tinokurudzira kuti usati ukohwa, iwe unosvina zvirimwa zvako zvembanje nemvura yakachena kana kutanga reverse-osmosis firita masvondo maviri usati wacheka. Kana iwe usingakwanise kusefa, saka shandisa pombi yemvura neyekujekesa mumiriri. Izvi zvinobvumidza makemikari ane chepfu kubuda kunze kwevhu mushure memazuva gumi ...
Kuomesa nekuporesa mbanje buds
Kune avo vasingazive nezve mabhenefiti ekuomesa kana kurapa mbesa dzako mbichana, inoonekwa seyitatu-nhanho maitiro. Ichazonaka kana yaomeswa uye ikaporeswa, uye ichakubatsira iwe kuti usakanganisa mapapu ako. Kuomesa kunogona kutora kusvika kumavhiki maviri, uye kurapa kunogona kutora mazuva gumi nemana-14, zvichienderana nezvakasiyana ...
Wedzera mbesa yako kukura mbesa
Chinhu chimwe chinoshamisa icho mbanje mbesa dzinokwanisa kuita kumutsiridza kwemavara kunyangwe mushure mekutanga kukohwa. Dzimwe mbeu dzinogona kupa goho mbiri kana nhatu dzakasiyana mugore rimwe chete. Kukohwa kwechipiri kunowanzoitika anenge mavhiki masere kusvika masere mushure mekutanga. Izvi zvinokonzerwa nekuwanda kwemuti wacho ...
Mhando zhinji dzesigna dzine hupfupi, kukura kwekutanga uye bushier anotarisa kwavari. Ivo zvakare vakawedzera chlorophyll uye shoma yeiyo pigment iyo inobatsira kuchengetedza zvirimwa kubva kuzuva rakawandisa, inonzi accessory pigment. Iyo yakawedzera huwandu hwechlorophyll inogona kubatsira iyi dzakasiyana mbanje ...
Murume vs Mukadzi zvinomera zvembanje
Kazhinji chirimwa chembanje chingave mukadzi kana murume, asi pano neapo unowana hermaphrodite mumusanganiswa. Zvirimwa zvechirume zvecannabis zvinoburitsa mukume uyo, kana ukasanganiswa nemaruva echikadzi, unoburitsa mbeu. Miti yechikadzi yecannabis inogona kuzoreswa nemurume uye kugadzira mbeu kana kusave ...
Dzidza kuziva chirume chirimwa mbanje
Hazvina mhosva kuti ndedzipi mhando dzembanje dzauri kurima, iwe unenge uine mukadzi kana murume zvirimwa. Zvirimwa zvemurume zvinozoburitsa mukume unozosvitsa maruva emiti yemadzimai. Kana kamwe munguva mbeu dzechikadzi dzinotanga kuburitsa mbeu. Kana usina murume mbanje chirimwa padhuze nevakadzi ...
Maitiro ekuchekerera yako mbanje zvirimwa
Pese panorimwa murimi kana kutema mativi echimwe chezvirimwa zvavo, hunde iyoyo inotsemuka kuita mabukira maviri matsva. Ivo vanobva vatanga kukura kubva padyo padyo mashizha axis. Maitiro ekuchekerera chirimwa chako chiri kukura ndiyo nzira iri nyore yekubatsira kudzora kusaenzana kana kukura kwemusango pasina kukuvadza mbanje yako inokosha ...
Muchinjikwa unobereka mbanje maronda
Iwe unogona kugadzira akacheka kubva kune akasarudzika emhando dzembanje michero inogona kukura nekukura kune kutumbuka nekukurumidza kupfuura mamwe marudzi. Mimwe mhando iri nani pane izvi kupfuura mamwe, saka unogona kuenda nekunhonga zvinonyanya kukura uye zvinokurumidza kukura uye kuita maruva zvirimwa, futi. Iwe uchazoda kuberekesa yako inokurumidza ...
Nzira iri nyore yekutanga kuita bonde
Iwe unogona kazhinji kutaurira murume kana murume wako mbanje zvirimwa nekukurumidza, zvichikuita kuti ubvise yako yemurume mbanje zvirimwa kubva munzvimbo iri kukura pamberi pekupora kuitika. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuvhara matavi akaderera kwazvo echirimwa kwemaawa gumi nemaviri zuva rega rega mukati meye 12-awa yechiedza chikamu. Uchishandisa chimwe chinhu senge nhema ...
Hupenyu kutenderera kweye mbanje chirimwa
Zvese zviri zvipenyu papasi rino, zvine hupenyu hwekutenderera, kusanganisira iyo mbanje chirimwa. Chese chipenyu chinozvarwa, chinotevera gwara rehupenyu uye chinopera kufa. Kuti ugone kutanga iyi hupenyu hwekutenderera zvakare. Iyo mbanje chirimwa inotanga sembeu imwe chete, kuti ive mhodzi, inotanga danho rekukura kwemuriwo uye ...
Dzorera patsva mbanje yako mushure mekukohwa
Kana iwe uchida kuyedza uye kugadzirisazve yakakohwa mbanje chirimwa kudzokera kune inomera nyika, zvinogoneka. Unogona kuita kuti chirimwa chako chikwanise kukohwiwa zvakare mumavhiki masere kusvika matanhatu nekuda kwekuumbwa kwedzinde nemidzi yemuti wembanje. Kana ichi chiri chinangwa chako, chinja maitiro ekukohwa kungosanganisa iyo yepamusoro ...